Yuusuf Garaad Doorashada Soomaliya 2 sano ayeey qaadaneysa Doorashada Somaliya | Dayniile.com
Home Warkii Yuusuf Garaad Doorashada Soomaliya 2 sano ayeey qaadaneysa Doorashada Somaliya
Yuusuf Garaad Doorashada Soomaliya 2 sano ayeey qaadaneysa Doorashada Somaliya
Wasiirkii hore ee arrimaha dibeda Somalia Yuusuf Garaad Cumar Axmed ayaa sheegay in doorashada xubnaha golaha shacabka ay qaadan doonto labo sano hadii aysan waxba iska bedelin sida gaabiska ah ee ay hadda ku socoto.
Qoraal uu baraha bulshada ku faafiyey ayuu Yuusuf Garaad ku faahfaahiyey sababta uu fekerkaas u aaminsan yahay.
Marka laga soo tago cilladaheeda kale ee tirada badan, doorashada dalka ka socotaa waxay qaadan doontaa laba sano.
Haa waa laba sano, waa haddii aan gaabiska ay hadda ku socoto wax laga beddelin.
Si aad isaga hubiso caddeynta, soo qaado qalin iyo waraaq, maaddaama aan geli doonno in yar oo xisaab ah.
Labada aqal ee Baarlamaanka isu geyn xubnahoodu waa 329. Mudanihii u horreeyay waxaa Kismaayo lagu doortay Khamiis, 29 July 2021.
Waxaa maanta laga joogaa 101 maalmood. Muddadaas waxa lagu doortay isu geyn 54 mudane. Waxaa harsan 275 hor leh.
Haddii sidaa gaabiska ah ay ku socoto, in la dhammaystiro doorashada xubnaha labada Aqal waxay qaadaneysaa 514 maalmood oo hadda naga dhimman. Waa sannad iyo toddoba bilood oo ku eg bisha May ee 2023.
101 maalmood oo ay hadda doorashadu “socotay”, laguna doortay 54 Mudane, iyo 514 maalmood oo haddii aan xawaaraha wax laga beddelin ay qaadan doonto in la doorto 275-ta Mudane ee Doorashadoodu ay harsan tahay, isu geyn waxay doorashadu soconeysaa 615 maalmood.
Waxay u dhigantaa 20 bilood.
Haddii lagu daro laba bilood oo lagu dooran doono Guddoonka labada Aqal iyo Madaxweyne, waxay doorashu soconeysaa 22 bilood oo u dhiganta laba sano oo laba bilood dhimman.
Yeey sidaan ugu badisaa? Ula kac miyaa ummadda loo khiyaamayaa? Mise waa mas’uuliyad darro iyo farsamo xumo dhanka madaxda ay gacanta ugu jirto doorashadu?
Mid ay tahayba, Soomaaliyeey sidaasi ma na qabataa?
Ujeeddadeydu ma aha dhaliil iyo niyad jebin. Ujeeddadeydu waa in jiitanka iyo gaabiska laga daayo doorashada, ayna mas’uuliyadda saran dareeman Madaxda ay doorashadu gacanta ugu jirto.
Waan ka quustay in aan ka quusto Soomaaliya
Previous articleSaaxiibka TPLF Waa Faraska Aan Dhibsan Culayskeeda
Next articleDegDeg: Guddoomiyaha guddiga Doorashadda heer Federal oo xilka laga qaadayo+Sabab
Dagaal xoogan oo ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidamada Maamulka Jubbaland iyo kuwa Kenya oo ka tirsan AMISOM iyo ururka Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Jasiiradda...
Ahmed Fiqi” Taliyaha Xooga Dalka Waa Dagaal Ooge Caan baxay asigoo...
Guddiga Doorashada Jubbaland Iyo QM Oo Ka Wada Hadlay Doorashada Golaha...
PUNTLAND OO DIL KU XUKUNTAY XUBNO KA TIRSAN AL-SHABAAB OO DAGAAL...
20 qof oo ku dhintay dhulgariir ka dhacay waddanka Pakistan
Khudbadaha musharixiinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi oo goor dhaw ka...
Ku dhawaad 30 qof oo ku dhimatay Dagaalkii magaalda Guriceel ee...